९ महिनादेखि साउदीको अस्पतालमा भर्ना भएका वाहिदलाई घर कस्ले फर्काइदिने ? — Cyber Headline
९ महिनादेखि साउदीको अस्पतालमा भर्ना भएका वाहिदलाई घर कस्ले फर्काइदिने ?
June 04, 2017 / Editor CyberHeadline
बुवाले दोस्रो बिहे गरेपछि घर चलाउने जिम्मा वाहिद खाँ कै काँधमा आयो । तर गर्ने कुनै उपाय थिएन । दिनको दुई छाक टार्न उब्जाउने जमिन थिएन । त्यति मात्रै होइन परिवारलाई ओत लगाउने छानो पनि चुहिन थालेको थियो । त्यसैले उहाँले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । उहाँलाई गाउँकै एजेण्ट फैज खाँले मिठो आश्वासन देखाए । जुस फ्याक्ट्रीको काम । तलब पनि राम्रै हुन्छ भनेको थिए । त्यसैले फैज खाँले सजिलो काम र अनि राम्रो तलव हुन्छ भन्ने आश देखाएका थिए ।
अभावका बेला राम्रो कमाइ हुने आश्वासन पाएपछि वाहिदले विदेश जाने निर्णय गर्नुभयो । उहाँलाई फैजले ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको कपिल ओभरसिजमा पुर्याउनुभयो । म्यानपावरले त्यसका लागि एक लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेको थियो । त्यसैले उहाँले गाउँकै साहुसँग ऋण लिएर एक लाख रुपैयाँ बुझाउनुभयो । २५ महिना अघि परिवारको खुशीको सपना लिएर साउदी पुगेपनि वाहिद देशभित्रै ठगिइसक्नुभएको थियो । किनकी उहाँले साउदी पुगेपछि भनेको काम पाउनुभएन । उहाँलाई नेपालमा जुस फ्याक्ट्रीको काम भनिएपनि साउदी पुग्ने बित्तिकै उहाँलाई सामान बोक्नुपर्ने काम लगायो । काम त गाह्रो थियो नै तलव पनि दिएन कम्पनीले ।
एक त परिवारको अवस्था दयनीय त्यसमाथि विदेश जाने बेलामा लिएको ऋण । त्यसैले उहाँ घर फर्किन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसमाथि दुई वर्षको सम्झौता अवधी भन्दा अगाडि फर्किंदा लाग्ने खर्च कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्ने भएपछि उहाँ त्यही काम गर्न बाध्य हुनुहुन्थ्यो तर १६ महिनापछि भने त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या थपियो वाहिदलाई । दिनभरी भारी बोकेर सुतेका वाहिदलाई सुतेकै ठाउँमा एकसय किलोको बोराले थिचेपछि उहाँको ढाड भाँचियो ।
सुरुमा कहाँ जाने के गर्ने केही थाहा थिएन । त्यसैले ५ महिना त्यतिकै अलमलिए । त्यसपछि म्यानपवारले सहयोग गर्ने आशा बोकेर वाहिदकी श्रीमती र छोराछोरी कपिल ओभरसिजमा आए । म्यानपावरले उहाँहरुलाई एक हप्ताभित्रैमा नेपाल झिकाइदिने भन्दै आफूले खबर गरेपछि मात्रै काठमाडौं आउनु भन्दै फर्काइदियो ।
साउदी पुगेको नौ महिनासम्म उहाँले एक पैसा पनि कमाउनुभएको थिएन । त्यसैले उहाँको उपचारका लागि उहाँलाई कम्पनीले नै अस्पताल भर्ना गर्यो । अहिले पनि उहाँ अस्पतालमै हुनुहुन्छ । उहाँ अस्पताल भर्ना भएको खबर पाए लगत्तै उहाँको परिवार उहाँलाई घर ल्याउन लागिपरेको छ तर ल्याउन सकेको छैन ।
तर एक हप्ता भनेको म्यानपावरले चार महिना बित्दा पनि उहाँलाई नेपाल फर्काउन केही पहल गरेको छैन । घरको अवस्था दयनीय भएकाले वाहिदका फुपाजू हातिम खाँ उहाँलाई घर फर्काइदिने सहयोगी खोज्दै दौडधुप गरिरहनुभएको छ । तर अहिलेसम्म पार लागेको छैन । ‘उनीहरुलाई एक हप्ताभित्रमा वाहिदलाई फर्काइदिने भनेको म्यानपवारले अहिले हाम्रो कुरै सुन्दैन’ हातिमले भन्नुभयो ।
केन्द्रले पहल गरेपनि अस्पतालले डिस्चार्ज गरेपछि मात्रै फर्काउन मिल्ने जानकारी आएको बताएको छ । तर उहाँको दुई वर्षको करार अवधि सकिएको छ । त्यसैले पनि परिवारमा चिन्ता थपिँदो छ । वाहिदको परिवारलाई न वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका बारेमा थाहा छ न त वैदेशिक रोजगार विभागकै बारेमा । त्यसैले उहाँको परिवार सूचना केन्द्रको पहलमा सबैले चासो दिएर वाहिदलाई घर फर्काइदिए हुन्थ्यो भन्ने आशमा छ ।
वाहिदको घरमा श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी छन् । परिवारसँग गरिखाने मेलो केही छैन । जग्गा जमिन पनि एउटा फुसको घर अट्ने भन्दा छैन । त्यही फुसको घर पनि भत्किएपछि हातिम खाँले नै टीनको छानो हालेर घर बनाइदिनुभएको छ । तर अब त उहाँको पनि सहयोग गर्ने क्षमता छैन । ‘मेरो पनि अवस्था राम्रो छैन मैले कसरी सहयोग गरौं’ हातिमले बाध्यता सुनाउनुभयो । वाहिदको परिवारले उहाँलाई नेपाल ल्याउन सहयोग माग्दै सुनसरीको इनरुवामा रहेको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा पनि निवेदन दिएको छ ।
June 04, 2017 / Editor CyberHeadline/ Comment
नजाऊ भन्दाभन्दै एकाएक विदेश पुगेकी ...
बस सडकबाट झन्डै २० मिटर तल खस्दा ...